Ukuze unqume ukuthi ukususa "Skype" akhawunti yomsebenzisi, ake sibheke-oda, onjani hlelo.
Kunzima ukuthola umuntu zanamuhla, ubani owaphucwa okungenani kanye wezwa igama sicelo othandwayo.
Skype - kungcono okubizwa ngokuthi uhlelo VoIP-uxhumano. Usebenza ikakhulukazi mahhala futhi inikeza uhlu olubanzi amasevisi. Lwakhiwe nge program Swedish, Danish futhi isi-Estonia ngo-2003. Iningi abasebenzi ehhovisi namanje elise-Estonia. Inani elikhulu of abasebenzisi nsuku zonke ukuze wenze amakholi ngezwi bese isiqophi embulungeni yonke. Uhlelo lokusebenza sihlanganisa eziningi wusizo abasebenzisi umhlangano imodi.
Indlela ukulanda uhlelo
Ngokuqinisekile, uma ufunda lesi sihloko, ayisekho kuba lula ngawe ukwenza entry "Skype". Abakhiqizi yalesi yesikhulumi zokuxhumana njengoba kulula ngangokunokwenzeka abasebenzisa inqubo yokufaka kanye ukusetshenziswa. Konke okudingeka ukwenze ukungena kwi website esemthethweni inkampani, kanye uhlelo zokuqopha "Skype" kuzolandelwa PC yakho, ikhompyutha ephathekayo noma ithebhulethi kalula.
Njengoba lokhu kubonakala alungise. Abantu abaningi ngaphezulu unesithakazelo, indlela khipha ama-akhawunti kusuka "Skype".
Indlela ngesandla ukususa i-akhawunti yakho
Ake sithi ngasizathu simbe unquma uyeke ukusebenzisa le software noma ngokushiya iphrofayli ubudala, uqalise olusha. Ngiyavuma, izizathu lokhu eziningi: Ukucabangela ukuphepha siqu, kwathatha ngenye indlela okhuluma ngayo, noma ukuhlaba ikhefu kusukela ukuphila kumatasa Inthanethi. Kulokhu, uzobe ngizibuza indlela ukususa ama-akhawunti ye "Skype". Prakthiza uye wasibonisa izinkinga eziningi ezihlobene nale senzo. Manje sizokubonisa ukuthi uzodinga ukususa akhawunti "i-Skype". Yiqiniso, i-PC yakho naku laptop yakho, noxhumano lwe-Inthanethi kanye uhlelo olufakwe. Ungesabi, ukuthi unganakile bakwazi ukususa i-akhawunti yakho ayikho. Phela, kukhona njalo indlela yokuphuma, kanye nokuntuleka impendulo eqondile embuzweni ukuthi ukususa ama-akhawunti ye "Skype", kuchaza developers ukuhambisana ukuphepha jikelele.
Ngokwesibonelo, ungakwazi ukushintsha ikheli E-mail yakho ngakolunye. Uma ikheli okunye ungaphenduki, ungadala salokhu ekhethekile. Manje into esemqoka - ayisekho iya ohlelweni ngokusebenzisa akhawunti endala. Lapho nje izinsuku pass 22 ngephasiwedi yakho endala ngeke ngokuzenzakalelayo zinyamalale kusukela search, futhi bakuthole ku-akhawunti yakho endala ngeke kwenzeke. Ungakhohlwa ukuthi udinga ukususa iphrofayli bese kusuka kwikhompyutha yakho. Uma yohlelo ngekhompyutha siqu, igcinwe futhi idatha yakho uzokhunjuzwa. Ukuze ayibulale, faka "Qala" imenyu, bese sifuna umsebenzi "Run" bese ufaka lo myalo: idatha Isicelo \_ a Skype. Lokhu kuvula ifasitela lapho zizobonakala kuwo wonke ama-akhawunti kusuka kuzo noma indlu yakho wangena isicelo. Manje bonke kufanele kuhlanzwe yonke idatha.
Uma ukwazi ukususa "Skype" akhawunti yomsebenzisi, ungakwazi ukusebenzisa amakhono agcwele uhlelo ngendlela ofuna ngayo: ukukhuluma, ukubiza, nokunye okuningi. Ekuphetheni, sethula uhlelo iqiniso elithakazelisayo ngale isicelo: uma uthayipha umlayezo esimweni kanyekanye ngokucindezela izihluthulelo 3 noma ngaphezulu ukuthi akuzona eduze, ucingo akanakuwubona evamile lokubhala ipensela, futhi ikati, ehamba phezu ikhibhodi. Uma-ke ungayeki, isithonjana sizoshintsha futhi. Ngenxa yalokho, interlocutor ungabona isithombe izandla, okuyinto sokudiliza ibe izingxenye 2 ka ipensela. Ngaphandle izithonjana esishunyekiwe "Skype" futhi iqukethe ezinye imfihlo. ongakhetha Kuchazwe kuxhomeke nguqulo yohlelo lokusebenza.
Inhloko-dolobha ye-Congo - Brazzaville
Iyini isifo seklabishi? Kila - inkathazo yabo bonke abalimi